Liinta Raspberry Cake Oo Ay Ku Jirto Raspberry Filling - Keega
Cake Liinta Raspberry Cake oo leh Liin dhanaan Liin dhanaan iyo buuxinta Raspberry cusub waa xilliga xagaaga la jecel yahay
Keega miraha liinta waa aqristaha akhristaha! Ka daawo fiidiyowgayga ku saabsan sida loo sameeyo keeg liin macaan oo miro macaan leh oo leh buuxinta miiska loo yaqaan 'raspberry buuxinta iyo' butterberream buttercream! Ka hadal xad dhaaf xad dhaaf ah!
Keega miraha loo yaqaan 'Lemon raspberry cake' wuxuu ubaahan yahay inuu kujiro liistada xagaaga wax lagu dubo! Hadaad jeceshahay tayda karinta keega vanilj ama aan classic karinta keega waad ka leexan doontaa midkan.
Keeggan liinta cusub ee miraha miraha waxaa lagu buuxiyay dhadhan liin laakiin qeybta aan ugu jeclahay waa buuxinta cusub ee miiska loo yaqaan 'raspberry fresh' oo lagu wareejiyay keegga oo dhan iyo qaniinyada macaan ee miraha!
sida loogu beddelo cabitaan kasta xanjo
Aad u qurux badan! Keegga waa la qaboojiyey oo waxaa laga buuxiyey socodkeyga-qabow subag badan, oo lagu duubay buuxin badan oo miiska loo yaqaan 'drip'. Liinta jarjaran iyo inbadan oo miraha loo yaqaan 'raspberries' ayaa umuuqda kuwo aad u macaan!
Mid ka mid ah asxaabteyda ugu fiican Kelsey wuxuu dhacaa inuu haysto ilaa 50 duur oo raspberry ah oo gurigeeda agtiisa ah (gabar nasiib badan) dhawaana waxay iisoo bandhigtay qiyaastii seddex rodol! Aad baan u farxay! Laakiin sidaad ogtahay, miraha loo yaqaan 'raspberries' si dhaqso leh ayey u kharribmaan inkasta oo aanan ku talagalin dubista maalintaas, waxaan dubay SADDEX waxyaalaha wanaagsan ee loo yaqaan 'raspberry Goodies' oo aan soo dhigi doono labada toddobaad ee soo socota.
Aynu ku bilowno qaybta liinta ee keeggan liinta miraha loo yaqaan 'raspberry cake'! Runtii kani waa kan aan jeclahay karinta keega in aan u isticmaali jiray sanado inyar oo dheeri ah oo liin dhanaan ah iyo liin dhanaan. Waxaan dareemayaa sida keega liinta oo leh dhadham aad u badan sida nacnac sidaa darteed waxaan doorbidaa inaan inta ugu badan ee dhadhankeyga ka helo zest.
Cuntadani keegga ah waxaa lagu sameeyaa bur keeg kaas oo ah bur aad u jilicsan oo cad. Daqiiqda keega ayaa ku siineysa jajabka ugu jilicsan ee jilicsan marka lagu daro habka isku-dhafka gadaal.
Markaad samaynayso keeggan, hubi in dhammaan maaddooyinkaagu ay ku jiraan heerkulka qolka si ay si habboon isugu darmaan. Caanaha qabow ama subagga ayaa jajabin doona isku darka waxayna sababi doonaan keeggaaga inuu si siman u siman yahay. Suugaan ahaan.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad isticmaasho miisaan. Haddii aad isku daydo inaad cabirto mugga google (koobabka) waxaan ballan qaadayaa inaysan soo noqon oo runti ma waxaad dooneysaa inaad lumiso dhammaan subaggaas qaaliga ah? Waad heli kartaa cabirka Waxaan ku isticmaalaa amazon ama waxaad ku iibsan kartaa miisaan miisaan aad u badan dukaan kasta oo ka hooseeya $ 20.
Haddii aad aniga oo kale tahay oo aad illowday inaad alaabtiinna u keento heerkulka qolka ka hor, waxaad isticmaali kartaa jabsashadayda roodhida caajiska ah. Waxaan ukumeydayda dhigaa baaquli biyo diirran 10 daqiiqo, microwave-ka caanaheyga 30 ilbiriqsi (waqtiga wey kuxirantahay haday kuxirantahay microwave-kaaga) aniguna waxaan ku shubaa subagkeyga 20 sekan. Voila!
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu cabsida badan ee ku saabsan miraha loo yaqaan 'raspberries' ayaa ah inay buuxiyaan wax aad u fiican! Cuntadani waxay aasaas u tahay macaanka loo yaqaan 'raspberry jam' oo lagu daray wax yar oo galley ah si looga dhigo waxoogaa xasilloon oo loo isticmaalo sidii loo buuxiyo keeg. Dareenka galleyda kama dhigeyso TOO qaro weyn inkasta oo markaa aad gebi ahaanba u isticmaali karto sida macaanka qaboojiyaha oo aad ku faafin karto wax kasta oo ka sameysan rodol rodol ilaa buskud (taas oo AAN SI DHAMMAAN u sameeyay).
Si aad u sameyso buuxinta miraha geedka oo dhan waxaad sameyneyso waa inaad ku dartaa miraha miraha sonkorta oo karkari. Waxaan doortaa inaan isticmaalo blender blender si buuxinta ay uga dhigto mid jilicsan laakiin waad ka tagi kartaa si dhib yar.
sida loo sameeyo keega strawberry qoyan
Ku dar liintaada iyo rooti galleyda ah iskuna daa ilaa ay ka caddaato oo haboonaato. qabow ka hor intaadan ku dhex isticmaalin keegaaga. Waxaan jecelahay inaan ku shubo kuwayga digsiga keega oo aan u kala qaado si khafiif ah si ay dhakhso ugu qaboojiso.
Sida Loo Sameeyo Cake Libaanka Raspberry Lakabka
Si aan u sameeyo keeggan liin qoyan ee keega miraha miraha loo yaqaan 'raspberry cake', waxaan isku daraa liimadayda sidii caadiga ahayd ka dibna ka hor inta aan dubin, waxaan ku wareegaa xoogaa dollops ah oo buufin miiska loo yaqaan 'raspberry buuxinta' waxaanan ku saydhaa qaar ka mid ah miraha loo yaqaan 'raspberry' cusub
Koofiyaddu waxay u egtahay inay hoos u sii degto sidaa darteed waxaan kaga tagayaa dhamaan waxyaabaha wanaagsan xaga sare si aan ugu sii haayo sida ugu macquulsan. Waxaan ku booriyaa miraha miraha leh bur qaar ka mid ah si aan uga caawiyo inay ugu ekaadaan baytarka oo aan ka ilaalino inay quusaan.
Waxaan dubay keeggan liinta miraha miraha subixii ka dibna waxaan ku qaboojiyey qaboojiyaha illaa ay ka helayaan meel adag oo ay wax ka qabtaan (saacad).
Markaasaan iyaga ka buuxiyey subag macaan iyo buuxinta raspberry. Waxaan dusha ka saaray keegga qaar ka mid ah liinta la jarjaray, raspberries badan iyo faleebada berry. Waan ku degdegay si aan casho ula qaato keegga sidaa darteed waxaan kaliya u isticmaalay qaaddo si aan u qooyo laakiin waxaad ku buuxin kartaa buuxinta boorsada tuubada oo waxaad samayn kartaa faleebo nadiif ah
Keeggan liinta miraha loo yaqaan 'raspberry cake' wuxuu ahaa mid aad u weyn! Caruurtu way cuneen waana inaan qiraa inaan u galay jeex labaad. Xitaa sidaan wax uga qorayo bartaas waxaan ka fekerayaa waqtiga soo socda ee aan samayn karo keeggan macaan!
Hubso inaad fiiriso fiidiyowga ku jira cuntada si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo sameeyo keegga liin macaan ee miraha miraha loo yaqaan 'raspberry buuxinta'.
miro guduud ah oo ka buuxsamey miro guduud ah
Keeg liin qoyan oo jilicsan oo leh buuxinta miraha miraha loo yaqaan 'raspberry casiir leh' iyo qabowga barafka loo yaqaan 'buttercream frosting'! Caanaha subagga ee ku jira keeggan keegga ah ayaa ka dhigaya keegga liinta mid aad u jilicsan. Macmacaanka ugu fiican ee xagaaga BBQ! Wuxuu sameeyaa seddex 6'x2 'keega ama labo' 8'x2 'moofo ah Waqtiga Diyaarinta:30 daqiiqado Waqtiga karinta:40 daqiiqado Wadarta Waqtiga:Afar. Shan daqiiqado Kalori:432kcal
▢16 oz (454 g) miro cusub ama barafoobay
▢5 oz (142 g) sonkorta
▢1 Tbsp (1 Tbsp) liin dhanaan
▢4 oz (113 g) biyo qabow
▢1 Tbsp (1 Tbsp) istaarijka galleyda
Liinta Raspberry Cake Waxyaabaha ay ka kooban tahay
▢13 oz (369 g) bur keeg
▢12 oz (340 g) sonkorta granulated
▢laba tsp (laba tsp) budada dubista
▢1/2 tsp (1/2 tsp) Fixiso
▢8 oz (227 g) subag aan cusbo lahayn
▢8 oz (284 g) caano subag Ama caano caadi ah oo lagu daray 1 Tbsp khal oo cad
▢3 oz (85 g) saliidda cuntada
▢3 (3) ukumo waaweyn
▢laba Tbsp (1 Tbsp) liin dhanaan
▢laba Tbsp (laba Tbsp) liin macaan
▢laba tsp (laba tsp) liinta laga soosaaray
▢laba Tbsp (laba Tbsp) Burka AP loogu talagalay boodhka boodhka
▢10 oz (284 g) miraha loo yaqaan 'raspberries' Waad isticmaali kartaa barafow laakiin ha dhalaalin
▢4 oz (113 g) ukunta la kariyey heerkulka qolka
▢16 oz (454 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka
▢16 oz (454 g) sonkorta budada ah sifeeyey
▢1 tsp (454 g) liinta laga soosaaray
▢1/2 tsp (laba tsp) cusbo
▢4 oz (113 g) miiska loo yaqaan 'raspberry'
Tilmaamaha Buuxinta Raspberry
Isku dar raspberries iyo sonkor digsi digsi oo isku kari. U isticmaal qashin-qub si aad u buuxisid buuxintiisa (ama ka tag cufan haddii aad doorbideyso). Isku dar budadaada galleyda ah iyo biyaha si aad u sameysid dharbaaxo. Ku shub isku darka miraha loo yaqaan 'raspberry mix' oo u daa inuu isku kariyo illaa inta isku darku ka caddaanayo oo ka sii weynaan doono. Ka qaad kuleylka, ku walaaq liin dhanaanka iyo xawaashka oo qabow ka hor intaadan isticmaalin.
Hadhaaga hadhay qaboojiyaha illaa toddobaad ama barafee 6 bilood.
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta budada ah baaquli isku qasan oo leh lifaaqa ku dheji. Jeeg isku dar. Ku dar subagga qaybo yaryar ka dibna soosaara vanilj iyo milix. Ku karbaasha dusha sare illaa iftiinka iyo khafiifka iyo caddaanka. Ikhtiyaari ah: ku karbaash 1/4 koob oo ah miraha loo yaqaan 'raspberry' Ikhtiyaari ah: u wareeji lifaaqa weelka iskuna qas hoos illaa 15-20 daqiiqadood illaa ay goobooyin hawo ahi ka dhammaanayaan.
Tilmaamaha Cake Libaanka Raspberry
Foornada kuleylka illaa 335º F / 168º C - 350º F / 177º C. Waxaan u jiheystaa inaan isticmaalo goob hoose si aan uga hortago keegagtayda inay aad ugu sii madoobaan banaanka ka hor intaysan gudaha ku dubin dubista. Hubso in maaddooyinka oo dhami ay yihiin heerkulka qolka ama in yar oo diiran (ukumo, caano subag, subag)
Cabir caano subag. Ku rid 4 oz koob gaar ah oo lagu cabbiro. Saliid ku dar 4oz oo caano caano ah oo meel dhig. Caanaha haray, ku dar ukuntaada (si khafiif ah u dhawaaq si ay u kala jabiyaan) soosaar, liin dhanaan iyo liin dhanaan.
Cabir maaddooyinka qallalan oo ku rid baaquli fiicniha taagan.
Ku dhaji fawaaxa mashiinka, oo shid xawaaraha ugu hooseeya (dejinta 1 ee qasacadaha Gargaarka Jikada). Si tartiib ah ugu dar qaybo yar oo subaggaaga jilicsan illaa inta laga wada dareemayo. Ha isku qasno illaa ay baytadu u egtahay ciid aan dhab ahayn.
Ku dar caanahaaga / saliidaada isku dar ah hal mar walxaha qallalan iskuna qas dhexdhexaad (xawaaraha 4 ee kitchenaid) 2 daqiiqo oo buuxa.
Weelka xoq. Tani waa tallaabo muhiim ah. Haddii aad ka booddo, waxaad ku dhex yeelan doontaa buro adag oo bur ah iyo waxyaabo aan isku qasanaynin oo ku jira budadaada. Hadaad goor dambe sameyso, si buuxda isuguma qasmi doonaan.
Si tartiib ah ugu dar inta hartay ee ku jirta maaddooyinka dareeraha ah ee 3 qaybood, adoo joojinaya inaad mar kale xoqdo weelka mar labaad dhexda. Foornadaadu waa inay ahaataa mid qaro weyn oo aan diirranayn.
Si qafiif ah u dufan 2 8 'keeg keeg doolshaha ama sii daayo digsi kale. Buuxi qasacadaha 3/4 buuxa. Sii digsiga xoogaa tuubbo dhinac walba ah si aad iskaga dhigto baytarka oo aad uga takhalusto wixii xunbo ee hawo ah.
Ku dar 3-4 dollops waaweyn oo ah miiskaaga miiska loo yaqaan 'raspberry buuxinta' digaagga keegga oo isticmaal qaaddo ama mindi si aad ugu wareejiso qashinka. Waxaan sidoo kale ku daraa qiyaastii 1/4 koob oo ah raspberries cusub oo lagu booriyay bur dusheeda lagu rusheeyey. Ha ku kicin iyaga.
Had iyo jeer waxaan ku bilaabaa dubista 30 daqiiqo 8 'keeg yar iyo 35 daqiiqo 9' iyo keeg waaweyn ka dibna waxaan hubiyaa midnimo. Haddii keega ay wali runti jiggly yihiin, waxaan ku darayaa 5 daqiiqo oo kale. Waxaan hubiyaa 2dii daqiiqo ee kasta ka dib markaa aan xirmayo ka dibna waa daqiiqad kasta 1. Keegag ayaa la sameeyaa markii caday la galiyay bartanka uu la soo baxo xoogaa jajab ah.
Ka dib marka keegayadu qaboobaan 10 daqiiqo ama digsiyada ay qabow ku filan yihiin in la taabto, digaaga ku duub oo ka saar digsiyada sariirta qaboojiyaha si aad u qaboojiso gebi ahaanba. Ku duub duub balaastig ah kuna qabooji qaboojiyaha.
Marka keegaga lagu qaboojiyo qaboojiyaha oo aad dareento adkeyn waad iska jari kartaa geesaha bunni ee dhinacyada (ikhtiyaar) oo waxaad ku buuxin kartaa subaggaaga iyo inbadan oo ka mid ah miiskaaga buuxinta. Waxaa ugu wanaagsan in la abuuro biyo xireen (fiiri fiidiyowga) si ay kaaga caawiso in lagu hayo buuxinta miiska loo yaqaan 'raspberry buuxinta' oo laga ilaaliyo in ay soo baxaan. Ku jajabi keegga leh buttercream, qabooji ka dibna mari joodarkaaga ugu dambeeya ee buttercream. Iskusoo wada xoq xaleefyada liinta, miraha loo yaqaan 'raspberries' badan iyo qulqulka 'raspberry buuxiya hareeraha geeska banaanka.
U adeegida:1adeegaya|Kalori:432kcal(22%)|Kaarboohaydraytyada:kontong(17%)|Protein:6g(12%)|Dufan:24g(37%)|Dufan Dufan:shan iyo tobang(75%)|Kalastarol:62mg(kow iyo labaatan%)|Sodium:254mg(kow iyo toban%)|Kaliumperyamper:84mg(laba%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:38g(42%)|Vitamin A:680IU(14%)|Vitamin C:0.7mg(1%)|Kaalshiyam:41mg(4%)|Bir:0.6mg(3%)
beddelka budada kookaha ee la warshadeeyay
sida loo sameeyo keega isku dhafan sifiican u dhadhamiya
keega liinta leh miiska buuxinta xoqida
sida loo dubo keega strawberry oo leh strawberries dhab ah
liin macmacaan keega arooska laga soo bilaabo xoq